iOS 14.5 Ichaunza Tsika Playlists yeMagumi Anopfuura Maguta paApple Music | IPhone nhau
iOS 14.5 ichaunza tsika dzekutamba dzemaguta anopfuura zana paApple Music
Ngirozi Gonzalez | | Apple Music, iOS 14
iOS 14.5 ndiyo inotevera hombe iOS yekuvandudza kubva kuApple. Kwemavhiki mashoma ikozvino, mabetas akatangwa kune vanogadzira uko nhau dzeramangwana dzinozarurwa. Pakati pavo pane mukana wekuvhura iyo iPhone uchishandisa iyo Apple Watch, kusvika kweanopfuura mazana maviri emoji nyowani uye kuvhurwa kwemakakatanwa emitemo yekuvanzika yeApp Store. Mune kodhi yeiyo beta 200 yeIOS 4 vakakwanisa kuona nhau mu Apple Music. Muchokwadi, ekupedzisira akawanikwa ari kuvhurwa kwetsika playlists nemaguta iyo ichavandudzwa zuva nezuva.
Apple Music inobata mweya mutsva nezvinhu zvitsva muIOS 14.5
Izvo zvitsva zvatiri kutaura nezvazvo zvakabhabhatidzwa naApple se Maguta Emaguta, tsika dzekutamba mumaguta anopfuura zana mukati meAppl Music. Nziyo dzinoteererwa kwazvo dzinozoonekwa kuitira kutsanangura mafambiro enzvimbo uye nekunanga kupfuura nenyika. Kuwanikwa kunouya nekutenda kwakazara kuongororwa kwekodhi yekodhi yeIOS 100 beta 4 na 9to5mac. Iyi kodhi inopfupisa basa seinotevera:
Ongorora zvinozivikanwa mumaguta anodarika zana kutenderera pasirese nemachati anovandudzwa zuva nezuva.
Billie Eilish achapa yakasarudzika online konzati paApple Music pamberi pekuratidzwa kwenyora yake paTV +
Iyo kodhi haina kusanganisira iwo maguta anozofarira izvi zvitsva, kunyange hazvo zvinoita sezviri pachena kuti misoro mikuru yenyika dzese dzenyika ichave nerondedzero. Zvinonzwisisika kuti maguta achasvinwa zvichienderana nenyika uye huvepo hwaApple mauri kana kukosha kweguta nehuwandu kana hukuru.
Zvinotarisirwa kuti Maguta Emaguta kana playlists nemaguta yakaburitswa zviri pamutemo nekusunungurwa kweIOS 14.5. Sezvo parizvino vasingaoneke muzvikamu zvakasiyana zveApple Music kunyangwe kana beta yakaiswa pane chero eanowirirana madivayiri. Zvichida kuti vanomirira kuvhurwa kwavo kwepamutemo kuti vavatange uye kuti ruzivo rwese rwakakosha rwuri kuunganidzwa mavhiki apfuura kuti vape zvinyorwa zvemhando yepamusoro
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 14 » iOS 14.5 ichaunza tsika dzekutamba dzemaguta anopfuura zana paApple Music
Instagram inodzivirira vanhu vakuru kutumira mameseji kune vechidiki vasingateere
Apple inobvumira Russia kuti itange-kuisa maapps paPhones anotengeswa mudzimba